Jinan jinWantong Imishini Ukukhiqiza Co., Ltd
Ingabe umkhiqizi okhokhelwayo we- yesikhulumi wokubacindezela wokubacindezela abakhiqizi basekhaya.
Imishini yokukhiqiza yaseFektri ithuthukile, ibutho elinamandla lobuchwepheshe, ubuchwepheshe obuthuthukile futhi okunengqondo, ukuhlolwa kusho ukuthi kuphelele. I-Italy, iJalimane uhlelo lwesiteshi samapayipi wokubacindezela, i-Italy uhlelo lokubacindezela lwedivayisi yokuqhuma kanye nedivayisi yokubacindezela eyedwa. Umkhiqizo unezinzuzo zokuqanjwa kwenoveli, ukwakheka okunengqondo, ibhalansi yokuphakamisa, ukusebenza okulula, ukugcinwa okulula, njll.
Isetshenziswa kabanzi ekulondolozweni kwezitshalo, ukufakwa kwezimboni, ukugcinwa kwemishini, ukuphathwa kwempahla, indawo yokugcina izinto, ukundiza, isikhumulo sezindiza, itheku, isiteshi, imishini, amakhemikhali, ezemithi, i-elekthronikhi, amandla kagesi nokunye ukufakwa nokugcinwa kwemishini yasemoyeni.
Imikhiqizo yenkampani isiyonke ingaphezulu kokunye futhi Izinhlobo ezingama-60 zochungechunge eziyisishiyagalombili.
Imikhiqizo yenkampani isiyonke kunezinhlobonhlobo ezingaphezu kwezingama-60 zochungechunge eziyisishiyagalombili, imikhiqizo eyinhloko eyiyo Uchungechunge lwe-SJY lwesikhulumi sohlobo lokuphakamisa umfutholuketshezi, amasampula we-SJT ophakamisa umfutholuketshezi, i-SJYC, i-SJYL uchungechunge lweloli eliphakamisa umfutholuketshezi i-Aluminium Alloy ipulatifomu yokuphakamisa umfutholuketshezi nemoto yebhodi engaguquki njll.
Yonke imikhiqizo yenkampani ihambisana nezinga lomkhakha kazwelonke. Futhi sithuthukise insika ejikelezayo ye-Aluminium Alloy, ipulatifomu ehlakaniphile yokuphakamisa isitimela yimboni efanayo kanye nochwepheshe abadumisa, ukusebenza okuyinhloko kufinyelele ezingeni elihamba phambili lasekhaya. Ngasikhathi sinye, singenza ngezifiso izinhlobo ezahlukahlukene zekheshi eliphakeme lamathani, ipulatifomu eqondile yokuphakamisa, ukuma okukhethekile, ubukhulu besikhulumi sokuphakamisa nemishini yokupaka.
Ikhwalithi nensizakalo ngokombono wethu akuyona inkomba yezomnotho kuphela, iyinkomba yobuntu, ezibophezele kwikhwalithi yomkhiqizo ovelele, inani lezimpawu zensizakalo, senza namakhasimende ukusungula ubudlelwano obuhle nentuthuko esimeme, imakethe igcwele ukuncintisana, kepha naka ngobuqotho nokubambisana kuyisisekelo sentuthuko, lapho kuphakama izinkinga lapho siqotho, isimo sokubambisana, silindele ukuxoxisana okulungile nokunengqondo, ukunamathela kwikhwalithi nesevisi, ukubambisana ngobuqotho, sithola impumelelo, sizuze idumela.
"Isikweletu"njengamabhizinisi amaShayina okufaka ikhadi lokungena emhlabeni, umnotho wezimakethe uyigazi lokuphila lemithambo yegazi. Kusukela "ukwethembeka" egameni legama lenkampani yami emakethe, kuye kwaqashelwa ngamakhasimende, ikhwalithi yesevisi yamakhasimende evela ebhizinisini, inkampani yethu ibilokhu "iye ekhwalithi esezingeni elifanele, isevisi ethambekele" njengenhloso yebhizinisi. Uma nje u-ode imikhiqizo yenkampani yami, noma ngabe ukuphi, sizothumela ngokushesha abasebenzi bezobuchwepheshe bezobuchwepheshe ngensizakalo yakho, ukwaneliseka kwakho ukuzibophezela kwethu!
Amanani ayisisekelo ebhizinisi
Ubuqotho obuhle bephethini yokudlala isimo sokuwina
Amakhasimende esevisi anikezela ukuthuthukiswa komphakathi kanye nokuwina
Ngenhloso yokulayisha ukuthembela kokuqonda okuyisisekelo kokuthembela ngokwabelana ngobungozi
Ukuzivumelanisa komuntu nesimo sayo nabantu bayo
Dala inani lomsebenzisi ukuwina idumela lebhizinisi
Ukunakekelwa kokuphepha kokukhiqizwa kwabasebenzi